Izinkinga Zezikhumba zeziNgulube - Izifo Zengulube
Pig Skin Problems
Izifo zeganga ezinamafutha kanye nezifo zesikhumba se-diamond ziyizimo ezimbili ezinkulu ezithinta izikhumba. Zombili zibangelwa amabhaktheriya futhi zingavinjelwa ngokusebenzisa imikhuba enhlanzekile.
Isifo seNgulube segrisi
©National Pork Board, USA
Isifo se-greasy pig, esaziwa nangokuthi i-epidermitis exudative, kubangelwa izinhlobo ezihlukahlukene ze-bacterium Staph Hyicus. Ngokwe-athikili ye-National Animal Disease Information Service, i-Pig Health; I-Greasy Pig Disease, amabhaktheriya ahlala esikhwameni sezingulube, kodwa izofuna i-trigger ukuveza lesi sifo. Lezi zimbangela zingase zibe yinto emonakalweni esikhumbeni, ezinye izifo, izinhlanzi phezu kwesikhumba noma amazinga aphezulu omswakama oveza umswakama wesikhumba esikhumbeni sezingulube, lapho amabhaktheriya anganda khona.
Lesi sifo sibangela ukubonakala kwe-orange enomzimba, obomvu kumnyama omnyama wokugcoba ekhanda nomzimba wezingulube futhi ngokuvamile kuthinta izingulube ezincane, njengabancinyane nabancancisi. Kuyingozi ikakhulukazi ezinkukhuleni ezincane, njengoba kuholela ekudambiseni amanzi. Ezingulube ezindala zingabangela amaguluma ukuthi aphule kancane kancane, okuholela ekulahlweni kwezikhumba ezisehlathini.
Ukusetshenziswa kwe-shampoo noma insipho kungasiza ukususa nokubulala amanye ama-bacterium, kodwa ngokuvamile izingulube zidinga ukusebenzisa imithi elwa namagciwane. Buza udokotela wezilwane ukuthola iseluleko ukuthi imithi yokulwa nayo isetshenziswe kanjani, ukukhomba uhlobo oluthile lwamabhaktheriya anesi sifo. Kumele kuthathwe ukunakekelwa ukuhlinzekela ama-piglets abathintekayo abancane anamanzi anele kanye nama-electrolyte ukuvimbela ukuphelelwa amandla kwamanzi.
Ama-pig anezikhumba ezinamafutha kufanele ahlukaniswe nezingulube ezinempilo ukuvimbela amabhaktheriya ukuba asakaze kwezinye izingulube. Ukuhlanzeka kufanele kusetshenziswe ukuze kugcinwe isibalo sezifo ezinamafutha ezibangelwa amagciwane. Isizathu sokutheleleka kumele siphinde sibhekiswe ekuvimbeleni ukuqubuka kwezikhathi ezizayo, kungaba ukulimala esikhumbeni, ezinye izifo, izimo ezingenabugovu noma izimo zezulu ezenza umswakama ongaphezu kwesikhumba.
Isifo sesikhumba se-Diamond, esaziwa nangokuthi i-Erysipelas, sibangelwa i-Erysipelothrix rhusiophathiae bacterium, etholakala ezinhlathini eziningi zezingulube. Ngokomhlahlandlela we-Quick Disease Guide wePig Site, izilwane ezingafika ku-50% zingathwala amabhaktheriya emathonini abo. Imfucuza ekhulelwe ingumthombo oyinhloko wokutheleleka, kepha ingase isakaze nge-urine namathe.
Isifo sesikhumba se-Diamond sithinta kakhulu izingulube ezikhulayo. Ngenkathi i-bacterium eyedwa ingabangela lesi sifo, ukuqubuka kungase kubangelwe nezinye izifo.
Isifo sesikhumba se-Diamond sinokuqala okungazelelwe futhi singabangela ukufa okungazelelwe ngenxa ye-septicemia enzima noma ukwehluleka kwenhliziyo. Igama layo lisuselwa ebomvu elibomvu elimise okwenziwe yi-diamond elibangela isikhumba sezingulube, ngenxa yokuvinjelwa kwegazi. Izindawo zingase zibe mnyama kamuva ngenxa yezicubu ezifile, kodwa iningi lilaphe ezinyangeni eziyisikhombisa kuya kweziyishumi.
Ngaphandle kwama-diamond, izikhumba ezithintekile ngokuvamile zinomkhuhlane ophezulu. Kuhlwanyela ngokuvamile kuvangela ukukhipha izisu, izinyanga zokubeletha kanye nezinkukhu ezifakwe emanzini, kanti izinhlanzi ziyobe zingenasifo uma nje zihlushwa isifo.
Izilwane ezithintekayo kufanele ziphathwe nge-penicillin ende esebenzayo. Buza iseluleko kuchwepheshe wezempilo wezilwane noma wezilwane ngezincomo zokuthi umkhiqizo ozowusebenzisa nokuthi ungayisebenzisa kanjani. Umgomo okhona ongasetshenziswa ukuvimbela iziqhumane.
Amahhashi anezifo zesikhumba sedayimani kufanele ahlukaniswe nezingulube ezinempilo ukuvimbela amabhaktheriya ukuba asakaze kwezinye izingulube. Ukuhlanzeka kufanele kusetshenziswe ukugcina izifo ezibangela ukuthi amabhaktheriya aphansi. Isizathu sokutheleleka kufanele sibhekiswe ekuvimbeleni ukuqubuka kwezikhathi ezizayo, kungaba ukulimala esikhumbeni, ezinye izifo, izimo ezingenabugovu.
Izinkinga Zeszikhumba zeNgulube – Okuphila Ngokudla Umzimba Ngaphandle
Utwayi, intwala, imikhaza kanye nezimpukane yizinye izidumbu ezingaphandle ezingabangela ukucasula isikhumba futhi kubangele ukulahlekelwa kwemikhiqizo....more
Iziphazamisi Eziningi Ezingaphandle
Umkhaza ungaphila ezindaweni zokuhlala ezikhungweni zezingulube, iminyango yama-warthog noma amakhaya abantu, kuyilapho ama-tick aqinile atholakala emadlelweni....more
Izinkinga Zesikhumba seNgulube Ukulimala Nokushiswa Kwelanga
Ingulube enempilo inesikhumba esihlanzekile, esithambile esiqhakaza ngokucacile....more